काठमाडौंका सीडीओ पराजुली भन्छन्- एक हप्ताका लागि खाद्यान्‍न खरिद गर्न त दुई दिन समय दिएकै छ नि !- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौंका सीडीओ पराजुली भन्छन्- एक हप्ताका लागि खाद्यान्‍न खरिद गर्न त दुई दिन समय दिएकै छ नि !
'संक्रमण दर घटिरहेको छैन, बिहान भीडभाड देखियो'
जेष्ठ ११, २०७८ जयसिंह महरा
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा २० गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा लम्बिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जेठ १४ देखि २० गतेसम्मका लागि जारी गरेको लकडाउन अहिलेको भन्दा कडा पारिएको छ ।
मंगलबार बसेको तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले जेठ १४ गतेदेखि २० गतेसम्म खाद्य पसलसमेत खोल्नमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । तरकारी, फलफूल, मासु, डेरी, खानेपानी र ग्यास पसल भने बिहान ९ बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय भएको छ । यसअघि जारी गरिएका सवारी पास खारेज गरिएको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सवारी सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेश उल्लंघन गरेमा कैद र जरिवारनासमेत गर्ने निर्णय भएको छ ।
खाद्यान्न पसल खोल्न नदिने र खोलेमा कैद र जरिवाना हुने आदेश जारी गरेपछि सर्वसाधारणमा भने भयको वातावरण सिर्जना भएको छ । निषेधाज्ञा कडा पार्नुको कारणबारे काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीसँगको कुराकानीः
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले खाद्य पसल पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ?
एक हप्ताका लागि खाद्यान्न, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरसमेत बन्द गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।
खाद्यान्न पसलसमेत बन्द गर्दा जनतामा असर पर्दैन ?
तरकारी फलफूल पसल खोलिदिएको छ । एक हप्ताका लागि भोलि र पर्सी त किन्न पाउनुहुन्छ नि उहाँहरूले । एक हप्ताका लागि कति मान्छेको सञ्चय हुन्छ । नभए तत्कालै सञ्चय गर्नुपर्‍यो ।
तपाईंहरूले के को आधारमा यस्तो निर्णय लिनुभएको हो ?
संक्रमण दर घटिरहेको छैन । बिहान भीडभाड देखियो । बिहानको भीडभाड रोक्नका लागि हो ।
तपाईंहरूको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा खाद्यान्नको जोहो कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्, यी प्रश्नलाई कसरी लिनुभएको छ ?
एक हप्ताका लागि खरिद गर्न भोलि र पर्सी त टाइम दिएकै छ नि ! १४ गतेदेखि लागू हुने गरेर निर्णय गरिएको हो । अब तरकारी पसल जुन बिग्रिने कुराका पसल खोल्दिएकै छ । दाल, चामल, तेल एक हप्ताका लागि सञ्चय गर्न सक्नुहुन्छ, भोलि र पर्सीमा खरिद गरेर राख्नुहुन्छ । एक हप्ताका लागि पुग्छ भनेर हामीले चेन ब्रेक (कोरोना संक्रमणको) गर्नका लागि निर्णय गरेको हो ।
निशेधाज्ञा त लगाउनुभयो कोरोना नियन्त्रणका लागि थप के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
कोरोना नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पीसीआर गराउने, भेन्टिलेटरका काम गर्ने हो । यो अवस्थामा पनि खोपको काम त हामीले रोकेका छैनौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्वाधार तयार गर्ने काम गराइराखेको छ । आइसोलेसन सेन्टर बनाउने पीसीआर परीक्षण गर्ने काम त गरिराखेको हुन्छ ।
तपाईंहरूको जिम्मेवारी भनेको निशेधाज्ञा लगाउने र हिँड्‌डुल गर्न रोक्ने मात्रै हो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ अरु कामहरू ।
उपत्यकामा निषेधाज्ञा जेठ २० गतेसम्म थपियो, खाद्यान्‍न पसल पनि बन्द
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ २०:३१
सिटिजन्सले अधिग्रहण गर्‍यो सिर्जना फाइनान्स
जेष्ठ ११, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — सिटिजन्स बैंकले विराटनगरमा रहेको सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडलाई अधिग्रहण गरेको छ । अधिग्रहण गर्ने अन्तिम सम्झौतापत्रमा मंगलबार दुवै संस्थाबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा सिटिजन्स बैंकका तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक प्रबलजंग पाण्डे र सिर्जना फाइनान्सका तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक सुवास आचार्यले हस्ताक्षर गरे ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत कारोबार सुरु हुने आचार्यले बताए । दुवै संस्थाले आफ्नो विशेष साधारणसभाबाट अन्तिम सम्झौता पारित गर्नेछन् । उक्त सम्झौतालाई नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि एकीकृत कारोबार सुरु हुने आचार्यको भनाइ छ ।
गत माघ २८ मा दुई संस्थाले प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सिर्जना फाइनान्सका लगानीकर्ताले सिटिजन्स बैंकमा एक सय बराबर ९५ कित्ता सेयर पाउनेछन । अधिग्रहणपछि बैंकको चुक्ता पूँजी बढेर १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुग्ने आचार्यले बताए ।
सिर्जनालाई अधिग्रहण गरेपछि सिटिजन्स बैंकको निक्षेप परिचालन १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । कर्जा प्रवाह पनि १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाा पुग्नेछ । बैंकको कुल शाखा संख्या १८९ हुनेछ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ २०:३०